Qeerroo jiddu galaa irraa !! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQeerroo jiddu galaa irraa !!
Akkuma guyyaa tokko dura odeeffannoo security moottummaa irraa dursinee arganne ifa goonee turre. Siidaa Art,Haacaluu Dilbata boruu Ambootti eebbifamuuf Kaabinnoonni opdo pp itti hirmaachuuf yaaddee fincaan of irratti yaasuu calqbde. WBO jidduu galaa oromiyaa daran cimee qophiin haleeluu calqabee fi qeerroo sodatanii jiru. Guyaa Har’aa Sanbata irraa kaasee Finfinnee hanga baakkootti police’n sakata’a cimaa keessa jiru.
Magaalota Baakkoo hanga Finfinnee jiru hunda keessatti Daandii magaalaa seenuu fi bahu hunda irratti sakata’aa jiru.
PP ‘n muddamtee umna qawwee fi OBN fi FB qofa irraa bookkisaa jirti malee uummanni oromoo hundi itti garagalee jira. Rogaa maraan oromoon qabsoo Itti muddee Ergamtoota nafxanyaa kana oromiyaa keessa diiguun cimee itti fufuu qaba.
Oromoota qaroo 24 himannaan irratti baname keessa torban isaanii Kunoo ti;
Kanneen hafan hoo eenyu fa’aa ti?
Adaraa Jaal Marroo itti hin dabaliinaa
Yooyyaa! Sagantaan keenya eegaleera! Dhiyaadhaa!
Koonfaransii Tumsa Sochii Haqa Oromoo – Kutaa 1ffaa: Impaayera Itoophiyaa keessatti dhiibbaan mirgaa hammaachuu fi diimokiraasii fi bilisummaan dhiphachuu | Xiinxala Imaammata Diinagdee Impaayera Itoophiyaa
#RSWO – Fuulbana 18, 2020
Dubbiin haaraan hardha dhalatte hin jirtu. Waanuma kalleessa abboonnii keenya nuuf himan san hojiitti hiikuu malee, waanuma isaab dubbatan san nus dubbachaa yeroo qisaasuu hin qabnu.
Sooreessa jaarraa abbaa gadaa rabbiin jannataan isaan haa qananiisu.
Sorressii Jarraa Abbaa gada
Akaas jedhen waa’ee #Nafaxanyaa.
Jannaata Rabbii ha kennuuf.
Hoggantoota fi miseensota ABO jajjaboo Mana hidhaatti dararamaa jiran hiikaa.
Free Jaal Lammii Beenyaa
Free Jaal Amaan Filee
Free Jaal Yaasoo Kabbabaa Hordofaa
Free Jaal Michael Boran
Free Kon.Gammachuu Ayyaanaa
Free Jaal Kaayyoo Fufaa
Free Jaal Daawwit Abdataa
Free Jaal Kennasaa Ayyaanaa
Free Jaal Addunyaa Keessoo
Free Jaal Gadaa Bultii
Free.Profeesar Bayyanaa Ruudaa
Free Eng.Daandii Garbooshee
Free Amaanu’el Beekkataa
Free Farajaa Geetaachoo
Free Abdii Kumsaa
Free Dr. Mo’aa Abdiisaa
Free Nimoonaa Urgeessaa
Free Amaanu’eel Beekkataa
Free Caalaa Usmaa’el
Free Takkaaliny Mardaasaa
Free Olii Durumaa
Free Boonsaa Hayiluu
Free Eng. Aanaa Baay’isaa
Free Jaalataa Lammii….